Nepalistudio » बिपी कोइरालाकाे मन्तव्य, के नेपाल भनेको यहाँका चार–पाँचवटा सहर मात्र हो ?
बिपी कोइरालाकाे मन्तव्य, के नेपाल भनेको यहाँका चार–पाँचवटा सहर मात्र हो ?
तपार्इंहरूलाई थाहा छ, म धेरै कराएर बोल्न सक्दिनँ । मेरो अन्त्यमा बोल्ने पालो परेकाले सुविधा पनि भएको छ, किनभने मैले भन्नुपर्ने पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभएको छ । म तिनैलाई फेरि दोहोर्‍याउँदिनँ र पञ्चायत मरिसकेको घोडा हो, त्यसलाई चाबुक मार्न पनि म चाहन्नँ ।
जब म ०१७ सालतिर प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसवेला राजासँग बराबर बातचित हुन्थ्यो र म भन्थेँ, म एउटा निम्नमध्यम वर्गीय आर्थिकस्तरको मानिस हुँ, मेरो धारणा छ, १५ वर्षभित्र नेपालका प्रत्येक परिवारलाई मेरोजत्तिको आर्थिक अवस्थामा ल्याउन सकिएला । तर, आज (२०३७ सालमा) बीस वर्षपछि आइपुग्दा देशको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक भएको छ ।
विकास गाउँमा भएको छ कि आँकडामा ? एउटा–दुइटा उदाहरण दिएर मेरो कुरा प्रस्ट गरूँ । अस्ति एउटा समारोहबाट फर्किंदै थिएँ । त्यो समारोहभित्रको वातावरण र बाहिर अड्याइएका ठुल्ठूला महँगा गाडी देख्ने जोसुकैले पनि भन्ने थियो, नेपालमा ठूलो विकास भएछ र यहाँका मानिस धेरै धनी भएछन् । त्यसै दिन म पहाडतिरबाट यहाँ (काठमाडौं) आएर डेरा गरी बस्ने केही विद्यार्थीको कोठामा गएँ ।
उनीहरू चार–पाँचजना एउटै कोठामा बसेका थिए । जसमा सुकुल बिछ्याइएको थियो र त्यसलाई मैलो तन्नाले ढाकेको र तकिया पनि त्यस्तै मैलो थियो । उनीहरू त्यस्तैमा सुत्दा रहेछन् । बगलमा एउटा फोहोर होटेल थियो । जहाँ उनीहरू खान्थे । होटेलको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ सफा र स्वस्थकर भोजन दिइँदैन ।
त्यस दिनका ती दुई अनुभवले मलाई के लाग्यो भने यहाँ दुइटा नेपाल रहेछ । एउटा महँगा मोटरगाडी चढ्ने नेपाल र अर्को गाउँको गरिब नेपाल । यी दुइटा दृश्यबाट म नेपालको विकासबारे सोच्नेलाई भन्न चाहन्छु— नेपालमा केही सडक बने, बिजुली उत्पादन भयो र हवाई यातायातसमेत विकास भयो ।
हामीले विकासका कुरा गर्दा अमेरिकाको नमुना देखाएर उदाहरण दिने गरेका छौँ, जो एकदम गलत हो । यो गल्तीबाट कम्युनिस्ट देशसमेत मुक्त छैनन् ।
तर, नेपालमा एभ्रो या जेट विमान चढ्ने कति छन् ? बिजुलीको सुविधा कतिले उपभोग गर्न सक्छन् ? अझ सडककै उपभोग कतिले गर्न पाएका छन् ? काठमाडौंबाट विराटनगर जाने सडकमा प्रतिदिन ३–४ वटा बस यताबाट र ३–४ वटा बस उताबाट आउँछन् । त्यसमा ३–४ सय मानिस आवतजावत गर्लान्, तर काठमाडौंबाट विराटनगर या उहाँबाट काठमाडौं ल्याउने–लाने अरू सामान केही छ, जसको ढुवानीबाट त्यो सडकको उपयोग अरू ज्यादा गर्न सकियोस् ।
के नेपाल भनेको यहाँका चार–पाँचवटा सहर हो ? कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यदि ठूलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ, उसैले उपयोग गर्छ । जेट प्लेन गाउँलेले चढ्दैन, बिजुलीको प्रचूर प्रयोग गर्दैन ।
त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री छँदा योजना आयोगको मिटिङमा भनेको थिएँ– तपार्इंहरू भित्तामा राजाको तस्बिरसँगै नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडीअगाडि उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्— यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? म आज पनि त्यही प्रश्न सोध्दै छु ।
हामीले विकासका कुरा गर्दा अमेरिकाको नमुना देखाएर उदाहरण दिने गरेका छौँ, जो एकदम गलत हो । यो गल्तीबाट कम्युनिस्ट देशसमेत मुक्त छैनन् । रुसले पनि आफ्नो औद्योगिक विकासको तथ्यांक या रेखाचित्र देखायो भने अमेरिकासित तुलना गरेर मात्र देखाउँछ । रुसका लागि पनि विकासको नमुना अमेरिका नै हो । अमेरिकाले यही शताब्दीको सुरुदेखि विकासको जुन नमुना देखाइदिएको छ, त्यो आज संसारसामु छ र सबै त्यसैको अनुसरण गर्दै छन् ।
अब अमेरिकामा के छ भनेर कुरा गर्‍यौँ भने सबैलाई थाहा छ, अमेरिकामा संसारको ६ प्रतिशत जनता बस्छन् र अमेरिकाले आफ्नो औद्योगिक विकासको संरक्षणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत जम्मा गरी संसारको ३० प्रतिशत प्राकृतिक साधन उपभोग गर्छ ।
आज हामी देशमा औद्योगिकीकरणको कुरा गर्छौं । औद्योगिकीकरण या सहरीकरण भनेको त्यस्तो केन्द्रीभूत प्रक्रिया हो, जसले ग्रामीण जनताको बेवास्ता गरेर सहरको मात्र विकास गर्छ । पढाइ–लेखाइका लागि सहरै जानुपर्‍यो, ओखतीमुलोका लागि सहर, किनमेलका लागि सहर, मनोरञ्जनका लागि पनि सहर ।
सारांशमा सम्पूर्ण कुरा सहरमा मात्र छन् । हामीले अहिलेसम्म यस्तै सहरको मात्र विकास गर्ने नमुनालाई लिएर योजना बनाएका छौँ, जसमा विदेशी सहायताद्वारा निर्मित सडकमा विदेशी मोटरगाडी विदेशी कलपुर्जा र विदेशी तेलले चल्छन् । केवल उपभोक्ता मात्र स्वदेशी छन् । ती पनि मुठीभर । त्यसकारण हामीले सोध्नुपरेको छ— हाम्रा ग्रामीण किसानलाई त्यसले के गर्‍यो ?
हामीलाई त आज गाउँलेले चलाउन सक्ने प्रविधि चाहिएको छ, अर्थात् हाम्रो किसानलाई कस्तो हलो चाहियो ? हलोको वैज्ञानिकीकरण, उन्नत बीजको व्यवस्था गरेर, सिँचाइ पुर्‍याएर उसको कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनलाई कसरी बेच्न सकिन्छ ? नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा योभन्दा बढी सार्थक के हुन सक्छ ?
०१७ मा संसदीय व्यवस्था भंग गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । आर्थिक विकासका लागि त्यसो गरिएको हो भन्ने नारा दिइयो । आर्थिक विकास भनेको प्राकृतिक जड स्रोतको परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो, जसद्वारा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गरिन्छ । राजनीतिक विकास भनेको मानिसलाई परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो ।
मानिसलाई विकासका निमित्त उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक संस्था हुन्छन्, जसमार्फत् उनीहरू विकासमा संलग्न हुन्छन् । ०१७ सालयता, गत २० वर्षमा मानिसलाई पनि प्राकृतिक स्रोतलाई जस्तै गरी विकासका लागि परिचालित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमात्मक धारणा लिएर विकास गर्न खोजियो । फलस्वरूप आज देश यो दुर्दशामा पुग्यो । वास्तवमा जड शक्ति–स्रोतभन्दा जनशक्ति परिचालित गर्नु झन् गाह्रो छ ।
(१२ साउन ०३७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी युनियनद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा कोइरालाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
साभार : ‘बिपी कोइरालाको आलेख, भाषण र अन्तर्वार्ता